Gudidda Qurba-Jooga beesha Ciise ee degaanka Saylac oo la kulmay Gudoomiye Ciro tageerona u muujiyey xisbiga Waddani Daawo Sawiro | Salaan Media
Home Community Gudidda Qurba-Jooga beesha Ciise ee degaanka Saylac oo la kulmay Gudoomiye Ciro...
Kulan xalayto ka dhacay Hotelka Blue Ocien oo ku yaala dalbeedka magaaladda London,kulankaas oo abaabuleen gudida degaanka Saylac aee beesha Ciise. Kulankan waxa hogaaminaayey gudoomiye kuxigeenka beesha Ciise ee UK.
Kulankan waxa kasoo qaybgalay Odayaal,Dhalinyaro iyo Haween kasoo jeeda degaanka ee degan dalka Ingiriiska. Kulankaas waxa ay gudida degaanka Saylac ay guoomiyaha Barlamaanka Somaliland ahna Gudoomiyaha Xisbiga Waddani uga warameen xaalada gobolka Selel iyagoo hordhigay cabashooyin ku saabsan doorashooyinkii dhawaan Somaliland ka dhacay oo ay ku shegeen in aan si cadaalad ah loo maamulin. Waxa kale oo ay ka warameen in dawlada Somaliland ee maanta jirtaa ay ka gaabisay in ay dadka degaanka degan waxqabad muuqda u qaban, haday noqoto xaga caafimaadka,Waxbarashada iyo dhamaan arimaha bulshada.
Waxa kale ay guddida Qurba-Jooga beesha Ciise ee UK ay shegeen in wakhtigii halganka qayb weyn kasoo qateen xoreynta Somaliland ayna tageero weyn u hayaan jiritaanka Somaliland. Waxa kale oo ay gudoomyaha talooyin usoo jeediyeen sidii uu fariintaa xukumada uga gaadhsiin si dhab ahna wax looga qabto.
Gudoomiye Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi ayaa dhinaciisa aad ugu mahad naqay kulankan “aad soo abaabusheen gudidiina kasoo jeeda degaanka Saylac, ugu horeyn cidkasta oo aynu kala nahay ama degaan kesta oo aynu kasoo jeedno waxa aynu leenahay hadaf kaliya oo ah Somaliland. Wuxu intaa ku daray Gudoomiyuhu “cabasho wey jirtaa oo idinka oo qudha maaha oo doorashadii dhawaan dhacday dad badan ayaa cabasho ka sameeyey lakiin waxa wacan in si wacan lagu dhameeyo,Waxa aan dalalkiikii aan soo maray ee Finland iyo Sweden aan la kulmay dad kale oo kasoo jeeda degaanka Saylac oo arimahaa aad soo jeediseen oo kale soo jeediyey,waxaanan balan ugu qaaday in aan dawlada gaadhsiin doon. Waxa kale oo Gudoomiye Ciro mar labaad u sheegay gudida Qurba-Jooga beesha Ciise ee degaanka Saylac in uu arinkaa daba gal ku sameynaayo.
Waxa kale oo ka qaybgalay kulanka casho sharafta ahaa qaar ka mid ah madaxda Xisbiga Waddani oo uu ka mid yahay Xoghayaha arimaha gaarka ah: Xuseen Aadan Cali (Xuseen-Asad), Gudoomiyaha Xisbiga Waddani UK Axmed Cali Naahi, gudoomiye ku xigeenka UK Mr Kenadiid iyo xubno gudida fulinta ah.
Kulankii waxa uu kusoo dhamaaday is afgarad iyo tageero ayBeeshu u muujiyeen Xisbiga Waddani oo ay ku shegeen inuu yahay xisbiga kaliya ee wax ka qaban kara arimaha Somaliland ee xiligan jira.